22 EWE, 250 NO: Zurab Pololikashvili kuNobhala-Jikelele we-UNWTO
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zikaRhulumente » 22 EWE, 250 NO: Zurab Pololikashvili kuNobhala-Jikelele we-UNWTO
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • komzila Ngoku • I-WTN
Kuphela malunga neeveki ezimbini de iNdibano Jikelele ye-UNWTO ihlangane eMadrid ukuze ithathe isigqibo sokuba isincomo seBhunga eliLawulayo ukususela ngoJanuwari ukuqinisekisa ukuba uNobhala-Jikelele wangoku kwelinye ixesha liya kuqinisekiswa.
Abaninzi kwishishini lezokhenketho lehlabathi banethemba lokuba abaphathiswa bezokhenketho bavule indlela yonyulo olutsha ngenxa yenani elikhulu lemibuzo kunye nemiba enike u-SG wangoku isikhundla sakhe.
Kwimeko ye-1/3 yamazwe okuvota kwiNdibano Jikelele ezayo ayiyi kuqinisekisa kwakhona uZurab Pololikashvili okwesibini njengeSecetary General ye-UNWTO, kukho inkqubo elula esele isekiwe ukumisela indawo.
Kwimeko apho akukho kunyulwa kwakhona kukaNobhala Jikelele, iNdibano yeZizwe eziManyeneyo iya kuthatha isivumelwano kwi-ajenda ye-9 yoNyulo lukaNobhala Jikelele, apho iyalela iBhunga eliLawulayo ukuba livule inkqubo entsha yokutyunjwa kwe-UNWTO. UNobhala Jikelele.
Uvavanyo olwenziwe ngu eTurboNews ibonisa ukugatywa okukhulu kokuqinisekiswa kwakhona kweZurab Pololikashvili.
eTurboNews ucele abaphathiswa, abathunywa, kunye namalungu akwizikhundla eziphezulu kushishino lwezokhenketho nokhenketho lwehlabathi ukuba banike iingcinga zabo malunga nokunyula kwakhona uNobhala Jikelele we-UNWTO kwikota yesibini.
Ikota yesibini yacetyiswa yintlanganiso ye-UNWTO yeSigqeba nge-20 kaJanuwari, iphakamisa amashiya amaninzi malunga nendlela inkqubo eqhutywe ngayo.
eTurboNews ukususela namhlanje ufumene iimpendulo ze-272 kunye ne-22 kuphela efuna ukumqinisekisa njengentloko ye-UNWTO kwikota yesibini.
Ezi mpendulo zavela eAlbania, eOstriya, eArgentina, eAruba, eOstreliya, eBangladesh, eBahamas, eBarbados, eBulgaria, eBelgium, eBenin, eBrazil, eBulgaria, eKhanada, eChina, e-Ecuador, e-Eswatini, eFransi, eJamani, eGeorgia, eGhana, eHong Kong, eHungary. , India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Ireland, Jamaica, Jordan, Kenya, Latvia, Malaysia, Mauritius, Mexico, Montenegro, Mozambique, Namibia, Nigeria, Norway, Philippines, Poland, Portugal, Saint Lucia, Senegal, Sierra Leone , South Africa, Saudi Arabia, Seychelles, Spain, Somalia, Sweden, Syria, Tanzania, Thailand, Uganda, UAE, UK, Ukraine, Uganda, USA, Venezuela, Zambia.
eTurboNews abafundi abakwizikhundla eziphambili zobunkokeli benza la mazwana alandelayo ukuze baqinisekise (YES), ukungaqinisekisi (NO). Ezinye iimpendulo zivela kubathunywa (abalungiseleli), ezinye zivela kumalungu aphambili kushishino lwehlabathi lokhenketho nokhenketho.
Ngokuqinisekileyo ukuva ukuqinisekiswa kokwenyani eMadrid malunga neeveki ezi-2 kuya kugqitywa kuphela ngabaphathiswa okanye ngoonozakuzaku abeza egameni labaphathiswa.
Kuthatha ilizwe elinye ukucela ivoti eyimfihlo kwaye uphephe ukuqeshwa ngokuvuma.
Iingcali zicinga ukuba oku kubalulekile kwivoti yoqinisekiso enobulungisa.
Iingxoxo ezifunyenweyo ngevoti ethi EWE:
Kufuneka kuqhutyekwe nokubuyisela uKhenketho kubuNgqongileyo balo. Ngeli xesha lokuzama kunye nesiganeko esingazange senzeke ngaphambili kufuneka sibe nomntu oqhelene nemicimbi yezoKhenketho kwaye usekwe uthungelwano kunye nehlabathi liphela.
Ngamava adlulileyo uZurab Pololikashvili unokujongana nemeko enzima yangoku. Kufuneka sixhase ngokusuka emazantsi entliziyo yethu kuzo zonke iinkalo kwaye senze njengeqela. UThixo uSomandla asisikelele sonke. Ameen.
Ngokuqinisekileyo kufuneka aphinde aqinisekiswe, ukuba abantu bafuna ukuba abuyele kufuneka enze i-tenure yesibini Into esiyifunayo bubulumko kwizinto ezinje ukuze singaphazamiseki , kukho eminye imiba ecinezelayo ephazamisa ishishini lokuhamba okwangoku. Kufuneka sizimisele kwaye sigxile .
Iingxoxo ezifunyenweyo ngeVoti HAYI:
Ayikhange ibe yintsha kwaye iquka konke
Wonke umntu okwaziyo kwaye ozimiseleyo ukubona, ukumamela kunye nokuziva ngasemva kwendawo uyazi ukuba uZurab P. ngoyena umbi kakhulu we-Gen Sec UNWTO. Ngelishwa le zibuko eGeorgia, ekusenokwenzeka ukuba ayinayo impembelelo ingako. Kubonakala ngathi i-ZP engafanelekanga iyindoda ye-strow yelinye ilizwe elinamandla elifanele lingakhankanywa esidlangalaleni.
Akazange enze nayiphi na inzame ebalulekileyo yokuphucula i-UNWTO.
I-UNWTO kufuneka ithathelwe ingqalelo. Lo Nobhala Jikelele akakhuthazi ukuzithemba - uJames Hepple, i-Tourism Analytics
Ukunqongophala kwengqibelelo; ukungabikho elubala; izenzo zobuqhophololo, ukuqhatha uvoto yintoni enye ekufuneka uyazi?
Kufuneka aphume kwaye avumele umntu onobuchule ngakumbi ukuba aqhube i-UNWTO
Ukuba kukho amathandabuzo xam inkqubo Ukubamba unyulo olutsha. Ukuba uphumelele ngenene ebengayi kukhathala ukuma kwakhona.
Njengowayesakuba ligosa le-UNWTO andiyamkeli indlela yangoku yokulawula iziko endilisebenzele ngokunyanisekileyo iminyaka engama-36!
Ngokuqinisekileyo HAYI- i-neoliberalism ayincedi
Tume yokutshintsha. Ishishini lifuna ubunkokeli obuqinileyo kunye nezopolitiko ezincinci. Kwaye kufuneka intsebenziswano ngakumbi phakathi kwamazwe kunye nemibutho enxulumene nokhenketho.
Ukuba uqinisekisiwe kuya kubangela ezinye okanye zonke ezi zilandelayo Ukulahlekelwa kwamalungu kunye nenkxaso-mali evela kumalungu ahlawula imali, Ukulahleka kokuthembeka ,Ukuphela kokuphela kwe-UNWTO okanye ubuncinane ukulahlekelwa yi-UN.
Amathandabuzo amaninzi ahamba nephulo lakhe. Ukukhetha kwakhe amazwe awandwendwelayo, kuthumo lwe-UNWTO kunye nesiphumo solu tyelelo lwenza intandabuzo elubala lwenkxaso ayifumene kwiBhunga lesiGqeba. Ukufuduka kwendawo ukuya eMadrid kunye nokungahoywa kweKenya sisizathu esongezelelweyo sokujonga isisombululo esingangqubaniyo.
AKANGUMNTU onyanisekileyo ..yayilihlazo iphulo lokugqibela noMphathiswa uWalter Mzembi..
Ukuba kukho ukuthandabuza malunga nokucaca kwendlela iKomidi eliLawulayo elifike ngayo kwisigqibo sabo ngoko iNdibano Jikelele ayifanele isetyenziswe njengesitampu serubha.
Kutshanje uye wasusa iNdibano yeZizwe eziManyeneyo ukusuka eAfrika ukuya eMadrid, eSpain ngaphandle kokuqwalaselwa kweKenya eyabhena ngokuchasene nesigqibo.
I-MNeed ukuqhubela phambili ekubuyiseleni uKhenketho kwimeko yalo yesiqhelo. Ngeli xesha lokuzama kunye nesiganeko esingazange senzeke ngaphambili kufuneka sibe nomntu oqhelene nemicimbi yezoKhenketho kwaye usekwe uthungelwano kunye nehlabathi liphela.
Ukhohlakele kwaye uwutshabalalisile umbutho UNWTO udinga inkokeli hayi uzwilakhe okhohlakeleyo.
Sifuna unyulo olunobulungisa
UGeneral Zurab Pololikashvili waphinda wanyulwa yiBhunga eliLawulayo ngoJanuwari phantsi kweemeko ezithandabuzekayo. Ndiyathemba ukuba ukukhanya okunyanisekileyo nokubalulekileyo kuza emoyeni wabo kunye nakoorhulumente abavela kumazwe abawameleyo.
Lost of elubala, unyango olubi kwicandelo labucala, imidlalo ezininzi kakhulu ukugcina umsebenzi wakhe, ukungabikho professionalism kunye nobukho, ukukhuthazwa abantu abangalunganga ngaphakathi UNWTO njengoko bakhethwa zezinye umdla ngaphezu izakhono zobungcali kunye nomthamo.
Sidinga utshintsho. I-Afrika kufuneka inikwe ithuba lokukhokela i-UNWTO okokuqala.
Uyisiqalo. Andazi iABC yezokhenketho. Ukhuthaza abantu bakhe ngokuyigatya ngokupheleleyo imigaqo nemimiselo.
Akawufanelekeli lo msebenzi.
Ukuzibandakanya kwezopolitiko zelizwe laseSpain ukuya kwikongolo yeqela elidumileyo (iqela eliphikisayo). Ngokwe-UN Ethics Office: - Kuya kufuneka uphephe imisebenzi yezopolitiko enokuthi ibonakalise kakubi kwi-UN, okanye inciphise ukuzimela kwakho nokungakhethi buso. -Kuphephe ukuphakamisa izikhundla zezopolitiko zelizwe okanye ukubonisa iziqinisekiso zabagqatswa bezopolitiko ngelixa usemsebenzini. -Ungazimeli njengomsebenzi we-UN xa usayina izicelo okanye ubandakanyeka kuwo nawuphi na umsebenzi wezopolitiko. UZurab ubonise kuTwitter ukubandakanyeka kwabo kwipolitiki yaseSpain: https://twitter.com/pololikashvili/status/1443230304240644096?s=20 https://twitter.com/pablocasado_/status/1443302875556466690?s=20
Ukuqeshwa koMlawuli waMalungu aManyano, uMnu Ion Vilcu: Owayesakuba ngunozakuzaku waseRomania eSpain, ngelixa uZurab wayenguNozakuzaku waseGeorgia – Akukho mkhondo wamava anxulumene nokhenketho kumava ka-Ion Vilcu.
Amalungu aManyano aphulukene nalo lonke ilizwi kwi-UNWTO. - Amalungu amaninzi aManyano adlulise ukukhungatheka kwawo kwi-UNWTO ngenxa yokuba phantse akukho msebenzi owenziweyo, kwaye uMlawuli usebenza kuphela kunye neqela elikhethiweyo lamaLungu aManyeneyo, ikakhulukazi eza eMadrid.
Ukurhanelwa nje kweemeko ezithandabuzekayo kunyulo kwakhona kuthethelela uhayi
Ummeli ohluphekayo wokhenketho lwehlabathi ngakumbi ngexesha lentlekele ye-Covid-19.
I-Pololikashvili izise ihlazo loluntu, i-odium, kunye nokudelela kwi-UNWTO. Ukuziphatha kwakhe okonakeleyo kuye kwakhwankqisa. Akakufanelekelanga kwaphela ukukhokela lo mbutho kwaye uya kuqhubeka engcolisa igama nokuthembeka kwawo ukuba uhlala esesikhundleni. Ndithi i-Good Riddance! Umbutho udinga umgqatswa othembekileyo nothembekileyo obeligcisa elaziwayo kushishino lwezokhenketho-umntu ofana noCarlos Vogeler waseSpain noZurab naye wamphatha kakubi kakhulu.
Akamele ixabiso le-arhente ye-UN
Kukho urhwaphilizo oluninzi.
Ubonakala ngathi wonakele ngokupheleleyo. Ukungenzi i-UNWTO nayiphi na iminqweno kwimbono yehlabathi, kungabikho ukuzinza kunye ne-ajenda yokuziphatha: Yonke i-UNWTO / i-UN kufuneka ingenelele ukumisa i-debacle kunye neentloni.
Kwanele! UNobhala Jikelele we-UN Organisation kufuneka abe ngumntu ovulelekileyo kunye nokunyamezela. Kwaye ngokuqinisekileyo unolwazi ngakumbi kuzo zonke iingqondo. Akukho ndawo yamayelenqe kunye nemidlalo efihlakeleyo kwinqanaba elinjalo loMbutho. UTaleb Rifai wamzisa kwesi sikhundla kwaye sisikhumbula kakuhle! Ngokubulela oku, ngenxa yomona wegama kunye nokubaluleka kwalo mntu kuluntu lonke lwehlabathi, wayeyedwa kwi-UNWTO kwaye yonke inxibelelwano yamiswa. Oku kukubetha ebusweni kungekuphela kukaTaleb, kodwa nakubo bonke abavotele iPololikashvili ngokucetyiswa nguRifai. Ihlabathi lonke.
UZurab Pololikashvili akanasimilo kwaye akanaso isakhono sokuba nguNobhala Jikelele we-UNWTO - kufuneka axoshwe.